टेलिकमको पोस्टपेडमा धेरै पैसा काटियो ? यसो गर्नुहोस् ! | सुदुरपश्चिम खबर
काठमाडौं । टेलिकमका पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले प्रत्येक महिना न्यूनतम ३८३.०७ रुपैयाँ रेन्टल शुल्क (रेन्टल चार्ज) तिर्नुपर्ने हुन्छ । यसको अर्थ ग्राहकले थोरै रकमको सुविधा प्रयोग गरेपनि रेण्टल वापतको उक्त रकम तिर्नैपर्ने हुन्छ ।
हेर्नू थियो त्यो लुकाएर आयौ : धर्मानन्द भट्ट
महिलालाई देख्ने बित्तिकै यी अंगमा पुग्छ पुरुषको कर्के नजर !
कम्पनीले उपलब्ध गराएको कर्पोरेट युजर ग्रुप (सीयूजी) अफर वा अन्य विशेष पोस्टपेड अफर लिएका ग्राहकहरुको हकमा भने यो रकम फरक हुनसक्छ । पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताहरुले धेरै सुविधा उपयोग गर्ने भएकाले यो व्यवस्था पुरानै हो ।
जुन अहिले पनि कायम छ । यही रेन्टल चार्ज वापतको रकमबाट पोस्टपेड प्याक खरिद गर्न, कुनैपनि प्याक खरिद नगरी फोन गर्न, एसएमएस गर्न वा डाटा चलाउन पाइन्छ ।
पछिल्लो समयमा नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेका विभिन्न प्याकमा प्रयोगकर्ताको आकर्षण बढदै गएको छ । ग्राहकले प्याक प्रयोग गर्दा रेन्टल चार्ज भन्दा छुट्टै रकम काटिन्छ ।
सस्तो दरका डेटा र भ्वाइस प्याक उपलब्ध भएकाले ग्राहकले यो रेन्टल चार्जको रकममा खासै ध्यान दिइरहेका हुँदैनन् । सामान्यतः नेपाली महिनाको अन्तितममा अर्थात् अंग्रेजी महिनाको १५ तारिखमा पोस्टपेड मोबाइलको बिल तयार हुन्छ ।
उक्त महिनामा रेण्टलभन्दा थोरै रकम प्रयोग गरेको भएपनि ३८३.०७ रुपैयाँ जोडेर त्यो महिनाको हिसाब गरिन्छ । मानौं, कुनै ग्राहकले महिनामा सय मात्र प्रयोग गरेको भएपनि ३८३.०७ नै काटिन्छ ।
यस्तो अवस्थामा आफ्नो २८३.०७ रुपैयाँ कता हरायो भनेर प्रयोगकर्ता झुक्किने गरेका छन् ।कम्पनीको जीएसएम पोस्टपेड सेवामा विगत लामो समयदेखि यसरी नै बिलिंग हुने गरेको थियो ।
तर हाल सस्तो दरका प्याकहरु उपलब्ध भएपश्चात् धेरै ग्राहक अन्यौलमा परिरहेका छन् । उदाहरणका लागि कुनै पोस्टपेड मोबाइल प्रयोगकर्ताले २०० रुपैयाँको प्याक प्रयोग गरेको छ भने प्याक (भ्वाइस वा डेटा) वापतको २०० रुपैयाँ र रेन्टल चार्ज वापतको ३८३.०७ रुपैयाँ गरी ५८३.०७ रुपैयाँ तिर्नुपर्छ ।
मानौं १४ तारिखका दिन ग्राहकको मोबाइलमा बाँकी रकम चार सय रुपैयाँ थियो भने सो रकम काटिएर थप १८३.०७ तिर्नुपर्ने हुन्छ । पोस्टपेड ग्राहकको यही अन्यौललाई सम्बोधन गर्न कम्पनीले हाल ‘पोस्टपेड प्याक’ उपलब्ध गराइरहेको छ ।
रेन्टल चार्ज वापतको रकमबाट प्रयोगकर्ताले यो प्याक खरिद गर्नसक्छन् । यसबाट ग्राहक झुक्किने सम्भावना समेत नरहने कम्पनीले जनाएको छ ।
यो प्याक प्रयोग गरी कम्पनीको नेटवर्कभित्र र बाहिर कल गर्न, एसएमएस पठाउन र डेटा चलाउन सकिन्छ । पोस्टपेड प्याक लिनका लागि आफ्नो पोस्टपेड मोबाइलबाट *1415#*2#डायल गर्नुपर्ने हुन्छ ।
यसैगरी *1415# गरी पोस्टपेड मोबाइल बिलको जानकारी लिन सकिन्छ । सेवा प्रयोग गरेवापत ग्राहकले कम्पनीलाई बुझाउन बाँकी रकमलाई ड्यू अमाउन्टको रुपमा देखिन्छ ।
यसमा देखिने अभाइलेबल क्रेडिट भने ग्राहकले जुनसुकै बेला जुनसुकै प्रयोजनका लागि उपयोग गर्न पाउने रकम हो । साथै सोही बिल कम्पनीको वेबसाइटमार्फत तथा कम्पनीको एप ‘नेपाल टेलिकम’ बाट पनि हेर्न सकिन्छ ।
यसैगरी कम्पनीको एपबाट आफूले प्रयोग गरेको पछिल्लो ५ दिनसम्मको सबै बिलको रेकर्ड अर्थात युजेज हिस्ट्रीमार्फत हेर्न सकिन्छ । नेपाल टेलिकमले उपलब्ध गराइरहेको पोस्टपेड मोबाइलमार्फत गरिने कलको दर प्रिपेडको तुलनामा सस्तो हुन्छ ।
साथै रेण्टल चार्ज समेत उपयोग गर्न सकिने गरी पोस्टपेड प्याक उपलब्ध भएकाले कम्पनीको जीएसएम पोस्टपेड सेवा थप आकर्षक हुने अपेक्षा कम्पनीले व्यक्त गरेको छ ।
जीवनको फरक मोड : कतार हिँडेको केटो काठमाडौंमा हिट गायक !
‘सूर्यवंशी’ फिल्म सेयरका कारण प्रदर्शनमा अन्योलता !
पुरुषले महिला देख्नासाथ सबैभन्दा पहिले शरीरका कुन ३ वटा अंग बढी हेर्छन? जानी राखौं !
लोकप्रिय गायक शिशिर योगीको यथार्थपरक भावमा ‘कर्णाली पारि’ गिति भिडियो सार्बजनिक !
कर्णालीका सांसद गणेशप्रसाद सिंहको गाडीमा आगजनी !